Izinto ezi-9 zikaGeorge W. Bush zilungele ukukhululeka koLuntu
Ngethuba lakhe kwi-ofisi, uMongameli Bush wenza izinto ezininzi ezininzi zeDemokhrasi kunye neenkululeko ezazingathandanga, kodwa ngokuphindaphindiweyo, irekhodi lakhe lokuzikhethela inkululeko, lidityanisiwe. Nazi izinto ezili-10 uB Bush ezenzileyo ukukhusela okanye ukuqhubela phambili inkululeko yoluntu yaseMerika.
Ukuguqulwa kweNgxaki yokuTshintshiselwa kwabemi
UGeorge W. Bush udibana nabathengi kwi-Dunkin Donuts engabanikazi bezolimo abazalelwa e-Iranian Abolhossein Ejtemai no-Ali Assayesh ukuba bashenxise icebo lakhe lokuguqula umgaqo-nkqubo wokufuduka. I-Pool / Getty Izithombe
Ngo-2006, bekukho ingxoxo phakathi kweCongressan-dominated Congress kwixesha elizayo le-12 yezigidi ezingekho phantsi kwamanye amazwe eMelika. INdlu yabaBameli abaqinileyo ngokuzimeleyo ixhaswa ngokuxoshwa kwabangaphandle kwamanye amazwe, ngokukodwa, ngelixa ama-Senators amaninzi ayithanda ukuveliswa kwendlela eya kubangela ukuba abantu abavela kwamanye amazwe abangekho mthethweni babe ngabemi. UBush wayemthanda indlela yokugqibela. Bobabini i-Senate kunye neNdlu yajika iRiphabhliki kwaye iyalondoloza ngakumbi ukhetho lwango-2010, kwaye ikhosi uBush yavuma ukuba ayiphumelelanga, kodwa wayifumana kwaye wayethetha.
Wachaza i-First Federal Ban kwi-Proficiency Profiling
UGeorge W. Bush ubingelela amalungu enkomfa emva kokuba athulise intetho yakhe yokuqala phambi kweseshoni edibeneyo ye-107th Congress kwiCapitol Hill. UMark Wilson / Getty Izithombe
Ngethuba lakhe lokuqala kwiNkulumbuso yeNyunyana ekuqaleni kuka-2001, uMengameli uBush wenza isifungo sokuphelisa ubuhlanga. Ngomnyaka ka-2003, wenza isithembiso sakhe ngokukhupha i-arhente yokunyanzelisa i-arhente yokunyanzelisa umthetho ngokubhekiselele ekupheleni kweendlela ezininzi zobuhlanga nobuhlanga. Bambalwa bangachaza ukuba oku kusombulule ingxaki, ehlala ingagqitywanga kwi-Obama kamongameli. Kubonakala ngathi yingxaki enzulu ebandakanyekileyo ebomini baseMelika kwaye ngokuqinisekileyo iya kuthatha ngaphezu kweNqununu yoMongameli ukuyicombulula, kodwa uBush unelungelo lokuthenga ngetyala.
Abazange baqoke izigwebo kwiMold of Scalia noTomas
UGeorge W. Bush uyabukela njengoko uJohn Roberts ufungelwa njengeJaji eliyiNtloko yeNkundla ePhakamileyo yaseMelika. Win McNamee / Getty Izithombe
Akukho namnye owayenokubiza iiNgqungquthela ezimbini zeNkundla ePhakamileyo. Nangona kunjalo, uJustice Samuel Alito kunye noMgwebi oyiNtloko uJohn Roberts -Izinto ezikhethekileyo - zibhekise ngakwesobunxele beSigqeba uClarence Thomas kunye no- Anthony Scalia . Abaphengululi bezomthetho bahluke ngohlobo lokumiselwa kukaBush kwinqanaba lokunene, kodwa ngokuqinisekileyo abazange bathengise isigxina esilungileyo esilindelekileyo.
Amkelwe kwiNombolo yeRekhodi kunye nabafunayo
Farida, umbaleki wase-Afghanistan, uhambisa idilesi yakhe njengoMongameli waseMelika uGeorge W. Bush uphulaphule ngaphambi kokusayinwa kwe-Afghan Women and Children Relief Act eWashington. Mike Theiler / Getty Images
Ngethuba lesibini kwikota yolawulo lukaClinton, iUnited States yamkela umyinge wama-60,000 ababaleki kunye nabangama-7,000 abafuna ukukhuphela ngonyaka. Ukususela ngo-2001 ukuya ku-2006, phantsi kobunkokheli bakaMongameli uBush, i-United States yamkela amaxesha angaphezu kwesine abafuna ukukhoseliswa-abango-32,000 ngonyaka - kunye nama-87,000 ababaleki ngamnye ngonyaka. Oku kudla ngokuchazwa ngabagxeki bakaBush, abahlala beqhathanisa irekhodi lakhe ngokungahambi kakuhle nabangaphumeli phantsi koMongameli Obama, owamkela isigidi-million.
Basebenzisa iBully Pulpit ukukhusela amaSulumane aseMerika
UGeorge W. Bush udibana neenkokheli zamaSulumane ngoSeptemba 17, 2001 emva kokutyelela iZiko lamaSulumane eWashington, DC. I-Getty Images / Getty Izithombe
Emva kokuhlaselwa kwe-9/11, ukulwa namaSulumane kunye nolwaphulo-mthetho lwama-Arab kwenyuka ngokukhawuleza. Phantse wonke umongameli kwimbali ye-United States ejongene nokuhlaselwa kwamaphekula avela kwamanye amazwe ekugqibeleni wanika uxolo - uMongameli uTolrow Wilson ungumzekelo obalaseleyo. UMongameli uB Bush akazange akhuphe iziganeko ezithandekayo kwisiseko sakhe ngokudibanisa namaqela angama-al-Arabhu kunye nama-Muslim ase-pro-Muslim emva kokuhlaselwa kunye nokuqhuba iziganeko zamaSulumane kwi-White House. Xa iidemokhrasi zithembela kwi-anti-Arabhu xa begxeka ukudluliselwa kwamanxweme ambalwa ase-US ukusuka eBrithani ukuya ku-UAE ubunini, kwacaca ukuba ubude bokuba ukuxhatshazwa kwabantu bekude kangakanani-kwaye kubaluleke kangakanani ukuba impendulo ebaluleke kakhulu yeBush ibe.
Idibeneyo kwiSebe eliLawulayo
Umntu owayekade e-US Attorney General Alberto Gonzales ususa umcimbi we-Rose Garden kwi-White House. Esi siganeko kwakukubhiyozelwa kweNyanga yeGugu yamaSpanishi. Win McNamee / Getty Izithombe
Izikhundla ezine eziphezulu kwisebe elilawulayo yizo zomongameli, i-vice-president, unobhala karhulumente, kunye negqwetha jikelele. Ngaphambi kokuba uMongameli uBush afike emagunyeni, akukho nanye kwezi ofisi ezine eziye zahlala zihlala ngumntu onemibala. UMongameli uBush wakhetha ummeli wokuqala waseLatin (u-Alberto Gonzales) kunye nabomabhalana bokuqala base-Afrika base-Afrika: uColin Powell noCondoleezza Rice . Nangona phambi kolawulo luka-Bush, kwakukho i-legislators kunye neNkundla ePhakamileyo yeeNkundla zomthetho, kwaze kwaba yilapho amalungu aseburhulumenteni abaphezulu be-executive executive behlala bengabamhlophe baseLatin.
IziNzuzo zePension ze-Federal Pension ezidibeneyo ezibandakanya abafazi abaneSini-Sexual Couples.
UGeorge W. Bush usabela kwi-ovation ngaphambi kokusayina uMthetho woKhuselo lwePensheni ka-2006. I-Chip Somodevilla / Getty Izithombe
Nangona uNgqongqoshe uBush Bush engazange athathwe ngokucacileyo kwi-LGBT yaseMelika, akazange ashintshe imigaqo-nkqubo yezemfundo ngendlela eya kubachaphazela. Ngokuchasene noko, ngo-2006 watyikitya ibhilida yeembali ezinika abantu abangatshatanga nabatshatileyo imilinganiselo yempesheni efanayo kunye neembhangqwana ezitshatileyo. Wabeka nomntu ongumntu oyedwa ongummeli waseRomania, wenqabe ukuguqula iintsapho zobomi kunye nabasetyhini kude ne-White House Easter yeqanda ngokuzingela njengokuba abanye abanokholo benkolo baxhasayo, kwaye benqabile ukuguqula umyalelo kaMongameli uClinton wokunqanda ulwaphulo-mthetho loqeshiso lwengqesho ngokusekelwe Ukwaziswa ngezesondo. Amagama akhe atshisayo malunga nentombi ka-Vice-President uCheney kunye neentsapho zakhe zenza umzekelo wezenzo zolawulo lwe-Bush ezithandekayo kwi-LGBT yaseMelika.
Ukukhusela ilungelo lokutya.
UDick Cheney uthetha kumalungu e-National Rifle Association echaza ukuxhasa kwe-Bush ukulungiswa kwamalungelo okulungiswa kwesibini ngexesha leNdibano ye-NRA yesi-133 yonyaka. UJeff Swensen / Getty Izithombe
Izibini ezi zilishumi zeBhushe zithandwa kakhulu. Xa uMongameli uBush wangena esikhundleni, ixesha lika-Clinton lokuhlaselwa kwemikhosi lalisasebenza . Nangona wayesekela ukuvinjelwa ngokuqhubekayo ngexesha lokhankaso lwakhe lo-2000, uMongameli Bush akazange enze umgudu omkhulu ukufuna ukuhlaziywa kwezixhobo zokulwa nokulwa kwaye kwaphela ngowama-2004. UMongameli uBush wasayinwa kamva umgaqo wokuthintela i-arhente yokunyanzeliswa komthetho ngokubambisa ngokusemthethweni i-arhente izibhamu - njengoko kwenziwa kwinqanaba elikhulu emva kwesiphepho seKatrina. Abanye abantu baseMelika bayichaza izenzo zikaBhitham njengokuba ziyamkeleka kwaye zixhasa isihlomelo sesibini kwiBhili yamaLungelo. Ezinye zibabona njengezihlongozo ezidabukisayo kwi-lobby gun ekhokelwa yi-National Rifle Association.
Watyikitya iSigqeba esiLawulayo sokunqabela ukuBamba kweSiza esiGunyaziwe seSithili.
USusette Kelo, ummangalelwa kwisigwebo seNkundla ePhakamileyo uKelo v. Icala lamalungelo epropati lifaka ubungqina kwi-domain ephezulu ngexesha leKomiti yeeNkundla zeeNkundla kwiCapitol Hill. Ikomiti ivalelwa ubungqina kwisigqibo seKelo kunye nokuphanda ukuthathwa kwamakhaya kunye neminye impahla yangasese. UMark Wilson / Getty Izithombe
Umyalelo kaBush wokunqanda ukuxhatshazwa kwesiqhelo sesigqeba se-federal iphikisana. Isigqeba seNkundla ePhakamileyo kwiChelo v. I-London entsha (2005) inikwe amandla karhulumente ukuba athabathe ipropati yabucala ukuba isebenzise urhwebo xa urhulumente wengingqi ebona ukusetyenziswa kwezorhwebo kunceda uluntu ngokubanzi, unike urhulumente igunya lokubamba impahla yangasese kwakukho ngaphambili. Ngelixa iilawulwayo zolawulo zingenawo amandla omthetho, kwaye urhulumente wesigqeba akasenzi ngokusemthethweni izibango zesigxina, ulawulo lukaMongameli uBush ubenqatshelwe ukuba lugxininise inkundla yokudlala ngokubhekiselele kwabo banxamnye namagunya aseburhulumenteni ngokubanzi. Ingaba le nto yayingummangaliso onokuzigcina inkululeko yamaMerika kunye namalungelo epropati yangasese okanye ukubethelwa kwii-libertarians eziqinileyo ezizimisele ukumelana nokuzama kukaRhulumente karhulumente ukuba anikezele okulungileyo kakhulu kuninzi? Iimbono ziyahluka.
Azange Adale "iMelika Ayiyi Kuyiqonda."
UGeorge W. Bush ugxotha izandla ngeNtloko yamaPolisa aseMetropolitan uCharles Ramsey emva kokusayinela i-USA Patriot kunye noBugcisa loKhusela ukuVunyelwa koMthetho ka-2005. UMark Wilson / Getty Images
Umongameli omkhulu uBongameli uB Bush ulungelelaniso lwentlalo unokuba nje ukungazange aphile ngokubhekiselele kwizinto ezilindelekileyo. Ngethuba lokhankaso ka-2004, ngoko uSeninari uHillary Clinton wasilumkisa ukuba ukukhethwa kwakhona kweBush kwakuza kuguqula ilizwe lethu, kusishiye nento awayibiza ngokuthi "iMelika asiyi kuyiqonda." Ngoxa uMongameli uBush ubhaliso lwentlalo yoluntu luxutywe, luyingozi kakhulu ngaphezu koyandulela, uMongameli Clinton. Abaphengululi bakaMongameli ngokubanzi bayaqonda ukuba, ukuhlaselwa kwe-World Trade Centre kwaye kwayitshintsha ingqondo yaseMerika ngokukhululeka kwintando yabantu kunye neendlela zokukhusela ezazinciphisa. Ngamafutshane, bekube nzima.
Ukuthelekisa uYohane kunye neeVangeli zeSixikethi
Mars kwiCapricorn: iMpawu zeMars
I-8 Iimpawu zeGlobal zeBhola eziPhambili zokuThengisa ngo-2018
Indlela yokudlala Ifomathi yoKhetho lomntu oyedwa
UWilliam Wilson: UMongameli wokuqala weMerika?